Iminyaka engama-20-ye-Vila-y-Chamorro: Kude Nentliziyo. U-Lorenzo Silva. | Uncwadi lwangoku
Iminyaka engama-20 ye-Vila y Chamorro, isibini esingoonogada basekuhlaleni esenziwe nguLorenzo Silva.
I-Strait yaseGibraltar, indawo yeLejos del Corazón, isavenge esitsha seVila y Chamorro.
Nangona kunjalo IVila kunye neChamorro khange ube mdala kangangeminyaka njengoko kudlulile isavenge sokuqala se- Ilizwe elikude lamachibi Ngo-1998, ukuba kukho ixesha elaneleyo phakathi kwabo kwaye, ngaphezu kwako konke, amava amaninzi ukuze usuku ngalunye babe nokucinga ngakumbi, bavuthwe kwaye bangangxami: Kude neNtliziyo ngu ukuhanjiswa kwenombolo 11 kolu thotho. USilva uyakhula kulowo nalowo njengombhali kunye nabalinganiswa bakhe.
"Mhlawumbi owona mceli mngeni mkhulu kubugcisa bokuphila ubandakanya ukufumanisa indlela yokuhlala unamathele kwiintsuku apho ubomi buqala ukukuthumela imiqondiso yokuba sele uqalile ukuchitha kuyo."
Yiyo ke le indlela ekude ngayo neNtliziyo, ngamazwi ka-Bevilacqua, Vila, ngoku ongu-lieutenant we-Civil Guard.
1 Kude Nentliziyo: iyelenqe.
2 Ulwaphulo-mthetho kwihlabathi eliya lisanda ngokwedijithali:
3 Abalinganiswa abaphambili:
4 Ukuqala kweVila y Chamorro.
Kude Nentliziyo: iyelenqe.
Kolu lonwabo lutsha, bajongene nelizwe elifanayo nelifani kakhulu Leyo bayenzileyo xa bebini bebaninzi kunogada waseburhulumenteni, uRubén Vila, usayitsheni, uVirginia Chamorro, unogada ophuma esikolweni. Ibekwe eCádiz, San Roque, Sotogrande, La Línea de la concepción naseGibraltar, kwiindawo apho ijografi kunye nezopolitiko zivumela narcotráfico Isizukulwana emva kwesizukulwana siyaqhubeka ngokungathi ixesha liyekile apho.
"Baye bakhulela kwimeko kunye nenkcubeko apho imali iyinto yonke: amandla, udumo, indlela yokuziphatha ekhuselekileyo yokuphila ubomi obunomona nabani na."
Ngaphandle kwakhe, kwisithunzi sakhe, wabulawa kumazwe aseBritane IGibraltar, ukuxhaphaza imali. USilva usibonisa indlela izinto eziye zatshintsha ngayo, kodwa ngokusisiseko, ubuncinci ngendlela yokuyenza. Ne imali ebonakalayo njenge-axis yokudibanisa yembali, iVila kunye ne-Chamorro bajongana nokunyamalala okusongelwe bitcoins, ukubiwa kwamandla okuqhubekeka kunye nokuchithwa kwezazisi zedijithali.
"Esinye sezizathu zokumisela ulawulo lobuchwephesha kwi-intanethi kube kanye, kodwa sele uyayazi: xa kufikwa kwezomthetho, akubalulekanga okanye kungxamisekileyo."
Ulwaphulo-mthetho kwihlabathi eliya lisanda ngokwedijithali:
Los iingcali zekhompyuter zoLondolozo loLuntu Ungene Kude nentliziyo un ubunzima ekusombululeni ukungavisisani ngokwexesha esiphila kulo, Abazange bacinge ngesona sibini sidumileyo kwi-Corps xa beshiya i-academy.
I-Bitcoins, ubusela bobuchwephesha bedijithali, inkqubo yokubiwa kwamandla kunye nokusetyenziswa gwenxa kwemali kwenza iyelenqe lokuba kude nentliziyo.
U-Lorenzo Silva unguye kwaye akanakunceda isiqhulo esithile sezopolitiko kodwa ayithinteli konke konke isingqisho esihle sebali.
"Masibone, nina nobabini, ukuba nifuna ukuzinikela ekwenzeni iinguqu kwezomthetho, cela ikhefu lokungabikho kwaye niza kuvela kunyulo olulandelayo noluhlu lwee-perroflautas."
Kwakhona uVila kunye neChamorro, bonwabisa, bazibandakanye, ngakumbi ukuba kunokwenzeka, kunasekuqaleni. Inkqubo ye- Ukuzola nokunyamezela kukaChamorrokunye Ifilosofi kaVila yokurhoxaBasenza sibonise ngelixa sisitya imbali ukufumanisa ukuba ngubani oyena mntu ungalunganga kwaba bantu babi.
"Nangona ukusukela kumzuzu othile ubomi yile, lonke ixesha: ujongene neenguqu zakho ongazange uzicingele kwaye awazi ukuba isihogo sichaza njani umntwana osekhoyo, efihliweyo kwenye indawo."
Vila Usenguye, kodwa ubushushu ngakumbi, iyaqhubeka nembonakalo yakhe yefilosofi:
"Amabhongo aphakathi sisiqingatha solonwabo."
Gcina ukupeyinta amajoni e-tin:
"Ukudakumba okukruqulayo," uBevilacqua uxelela umama wakhe.
Y bobabini bahlala imiphefumlo emibini elilolo abo ubudlelwane abuhambi kakuhle.
"Kukho izinto eziyeka ukuba ngenxa yokuba akufuneki ukuba ziqhubeke, kwaye ingqumbo ayifanelekanga njengayo nayiphi na indlela yokubanqwenela."
Ukuqala kweVila y Chamorro.
Abanye abahleli babephosisile xa benqaba ukupapasha ibali lokuqala loonogada babini, Ilizwe elikude lamachibi. Kulula kakhulu ukuyibona ngokucacileyo namhlanje, emva ukuhanjiswa okungamashumi amabini kunye neencwadi ezizigidi ezibini ezithengisiweyo, kodwa inyani kukuba akukho mntu waziyo ukuba unokuqikelela ikamva, nokuba bangabavakalisi kangakanani na.
Namhlanje, inoveli yolwaphulo-mthetho yaseSpain ibingazukufana ngaphandle kukaLorenzo Silva, umbono wokuba abafundi boLondolozo loLuntu basondele ngakumbi kuVila, eChamorro kunye nabalingane abahamba nabo kwimeko nganye.
Njengoko uRubén Bevilacqua ngokwakhe esithi:
"Ubomi, njengembuyekezo ngayo yonke into oyithathayo kuwe, ukusuka kubumsulwa ukuya kumandla obutsha, akunikezi ezinye izixhobo kuphela kodwa uzimisele nokuzisebenzisa, kwaye wenze njalo ngendlela engadumanga kakhulu."
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Inoveli emnyama » Iminyaka engama-20 ye-Vila y Chamorro, isibini esingoonogada basekuhlaleni esenziwe nguLorenzo Silva.
Namhlanje kuphawula isikhumbuzo seminyaka engamashumi alithoba anesibhozo sokuzalwa kwePD James
Ukukhumbula uHerman Melville. Amabinzana angama-20 emisebenzi yakhe